Anyone Can Cook (လူတိုင်းချက်နိုင်တယ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » Anyone Can Cook (လူတိုင်းချက်နိုင်တယ်)	21
Posted by အောင် မိုးသူ on Jun 27, 2016 in My Dear Diary | 21 comments
ပရိုဂရမ်အသစ်လေးလုပ်မို့ ကြိုးစားနေတာ အခု လုပ်မယ့်ပရိုဂရမ်ကို နမူနာရိုက်ပြီး သွားပြတာ စပွန်ဆာရလာခဲ့ပြီ။
အပြင်မှာတင် မဟုတ်ဘူး တီဗွီပေါ်မှာပါ ဟင်းတွေချက်ပြတော့မယ်။ ပရိုဂရမ်လေးနာမည်က Anyone Can Cook (လူတိုင်းချက်နိုင်တယ်) လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations Mg Aung!
Wish you more success and all the best of luck.
ဟိုးတစ်ခါ မင်း ပြောထားဘူးတဲ့ အမေ့ ကို ခြံ နဲ့ အိမ်လေး ဝယ်ပေးချင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးလဲ အမြန်ပြည့်ပါစေ။ :-))
အောင် မိုးသူ says: ပြည့်မှာပါ ဒါပေမယ့် အဝေးကြီးလိုသေးတယ် အရီးရေ။
Ma Ei says: ကြိုးစားမှုအပင်လေး အပွင့် အသီးလေးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်
ဦးကျောက်ခဲ says: အောင်မြင်ပါစေဗျား … စံနစ်တကျ လုပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့…
အောင် မိုးသူ says: ရုပ်ရှင်ထက် တာဝန်ကြီးတယ် သေချာစဉ်းစားထားတယ် အူးကျောက်ရေ။ အကူအညီလည်း လှမ်းတောင်းပါ့မယ်။ ဟိဟိ။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: Anyone can eat တို့ဘာတို့ ရှိဘူးလား
ရှိရင် ကျော်ရှေ့ဆုံးကပါမယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အစီအစဉ်မှာ ဧည့်သည်အနေနဲ့ လာစားလေ ဖိတ်မယ်။
Thint Aye Yeik says: .ဖွေးဖွေးသား စားချင်တယ်
ဘယ်လိုလေး စားရင်ကောင်းမလဲ အကြံပေးကြပါအုန်း
အောင် မိုးသူ says: 376 တဲ့ သားရေ
ဂျစ်စူ says: Any one can drink ဆို ပြောဘာအူးဂျ
အောင် မိုးသူ says: တကယ်တော့ အဲ့အစီအစဉ်ကို ပိုလုပ်ချင်တာ ဟိဟိ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 385
တောတွင်းပျော် says: ကိုအောင်မိုးသူ တစ်ယောက်
ဆက်တိုက်အောင်မြင်နေတာတွေ့ ရတော့ 
တကယ့် စိတ်ရင်းနဲ့ ပဲ
ဒီထက်မကလည်း ဆက်တိုက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ …
အောင် မိုးသူ says: မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားနေတုန်းပါ။
kai says: Napa Valley နပတောင်ကြားမှာ.. CIA (The Culinary Institute of America)ဆိုတာရှိတယ်..
အဲဒီမှာ.. ဟင်းချက်ပြုတ်အစီအစဉ်ကို တီဗီရိုက်ဖို့.. တခါတည်းဆက်တင်လုပ်ထားတာရှိတယ်..။
တီဗီရိုက်နေတုံး.. လူတွေကြည့်ဖို့လည်း… စင်မြင့်ခုံတန်းတွေနဲ့..။
ပြောချင်တာက.. ပရိုဆန်ဆန်.. သေသေချာချာလုပ်.. နာမယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပါ..။
အချက်အပြုတ်သမားဆိုတာကတော့.. စားလည်းစား.. လူမြင်လည်းခန့်အောင်… ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်.. စာဖိုမှုးတွေနဲ့မှ.. ပိုအရသာရှိတာလို့ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ရတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကောင်းအောင် ရိုက်ရမှာပေါ့နော်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြက်တောင်ပံစား မြားမသိစေနဲ့ ဆိုထားတာမို့ ကြက်တောင်ပံဟင်းနဲ့ စဖွင့်သင့်တယ်ဂျ။ သာမီးလေးတွေကို စကပ်တို လည်ဟိုက် ဝတ်ခိုင်းပီး မောင်သူက အောက်ခံဘောင်းဘီလေးနဲ့ ချက်ပြ။ အဝတ်စားဖိုး မလိုလို့ ဘတ်ဂျက်သက်သာမဲ…။
အောင် မိုးသူ says: အူးကြောင်ကို အရေခွံစုတ်ပြီး ကင်ပြမယ်လေ
ခင်ဇော် says: ချက်ပြဖို့တော့ မခေါ်ပါနဲ့။
ဘယ်လို အရသာရှိကြောင်း ပြောပြဖို့နဲ့ စားပြဖို့တော့ မမချွိ တာဝန်ယူပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ချက်မပြနဲ့ စကပ်တိုဝတ် ပေါင်ပြ။။။
Foolish Girl says: fb မှာတွေ့လိုက်တယ် Page ကို like လုပ်ထားတာ ဒီတပတ်ထဲအားရင် ပူတင်းကျောက်ကျောလေးလုပ်စားမို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.